UKWABELANA NGO-PRIYANKA CHOPRA YENYE YEEFOTO ZOMTSHATO EZIHLE - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato U-Priyanka Chopra wabelana ngomnye uMfanekiso oMnandi ukusuka kuMtshato wakhe kuNick Jonas
U-Priyanka Chopra wabelana ngomnye uMfanekiso oMnandi ukusuka kuMtshato wakhe kuNick Jonas
Umdlali weqonga waseIndiya uPriyanka Chopra (L) kunye nemvumi yaseMelika uNick Jonas, abasandula ukutshata, bathatha ifoto ngexesha lokwamkela eNew Delhi nge-4 kaDisemba ngo-2018. Nge-2 kaDisemba ngeendwendwe zabo zomtshato ezazineenkwenkwezi njengoko esi sibini sasibopha iqhina kwibhotwe laseIndiya. (Ifoto ngu-SAJJAD HUSSAIN / AFP) (Ifoto ngetyala kufuneka ifundwe ngu-SAJJAD HUSSAIN / AFP / Getty Izithombe)
Ngu: Esther Lee 12/18/2018 kwi-2: 56 PM
Ngaba u-Priyanka Chopra no-Nick Jonas bayifumana i-albhamu yabo yomtshato? Abasandul 'ukutshata, iiveki ezimbalwa bephume emtshatweni wabo kaDisemba 1, bezityhila kancinci iifoto zomtshato wabo omnandi kwibhotwe lase-Umaid Bhawan eJodhpur, e-India.
Umfanekiso wamva nje kwabelwana ngawo ngoLwesibini, nge-18 kuDisemba, nguChopra, etyhila umbono ngaphakathi komtshato wesibini emva komtshato. Ngalo msitho, bobabini uJonas noChopra batshintshe iimpahla zabo bazibhiyozela kodwa azikho semthethweni njengezambatho zabo.
Iposi ekwabelwana ngalo ngu-Priyanka Chopra Jonas (@priyankachopra) Nge-Dec 18, 2018 nge-5: 43 am PST
Inkqubo ye- Quantico Umdlali weqonga wayebukeka emhle kwisilika esinehlombe enxitywe ngegreyidi. Ukuba nosapho kunye nabahlobo bethu babelana ngolusuku lwethu olukhethekileyo kunye nathi kwakuthetha lukhulu… uncumo, amagama, uthando kunye nokuwola- konke kucingisisa, wachaza umfanekiso.
izipho zekrisimesi zomyeni wam
Kwaye ingunaphakade iqala ngoku… ❤️ @nickjonas
Iposi ekwabelwana ngalo ngu UPriyanka Chopra uJonas (@priyankachopra) ngo-Dec 4, 2018 kwi-4: 36 am PST
Kwiveki ephelileyo namhlanje ❤️ @priyankachopra
izipho zomtshato womtshato wesibini
Iposi ekwabelwana ngalo ngu UNick Jonas (@nickjonas) ngo-Dec 9, 2018 ngo-1: 56 pm PST
Olona suku lonwabisayo ebomini bam. @iamfanlalisa
Iposi ekwabelwana ngalo ngu UNick Jonas (@nickjonas) ngo-Dec 4, 2018 kwi-4: 46 am PST
UChopra uphinde walandela enye ifoto kwi-Instagram esuka kwiVogue shoot yakhe noJonas. Umfanekiso wakhe othandekayo noJonas uthathwe nguAnnie Leibovitz ngaphambi komtshato wesibini. Ndijonge ngokumangaliswa kuko konke okuza phambili .. kwaye ndizaliswe luvuyo, watsho.
Ndijonga ngokumangaliswa kuko konke okuzayo .. kwaye ndizele luvuyo ..
Iposi ekwabelwana ngalo ngu UPriyanka Chopra uJonas (@priyankachopra) ngo-Dec 18, 2018 ngo-6: 29 ekuseni PST
Esi sibini sasineminyhadala yomtshato emibini, eqala ngomtshato wamaKristu ngoDisemba 1 elandelwa ngumtshato wamaHindu ngosuku olulandelayo. Yanyibilika intliziyo yam, emva koko uxelele abantu. Ukukwazi ukuba nemitshato emibini emikhulu, eIndiya, nosapho lwethu olusondeleyo kunye nabahlobo kwakukhetheke ngokungakholelekiyo.
indlela yokucebisa abathengisi bomtshato
iingoma zokudanisa eziphezulu zemitshato
zeziphi izipho onika ngazo xa uhlamba umfazi
amakhonkco omtshato amadoda nabafazi
iqhina ligcina umhla